လည်ချောင်းခြောက်ပြီး လည်ချောင်းနာရတဲ့ အကြောင်းရင်း - YOYARLAY Digital Media and News
ပတ်ဝန်းကျင်လေထုက ခြောက်သွေ့နေတဲ့အခါ လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ အမြှေးပါးနံရံတွေက ကျိန်းစပ်စပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ သာမန် အအေးမိဖျားနာကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုးဝင်ပြီး လည်ချောင်း ခြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ အဖျားပျောက်ပြီဆိုတာနဲ့ လိုက်ပျောက်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် လေထု ညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင့်လည်း လည်ချောင်း ခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဆားရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာတို့၊ ရေနွေးနွေးလေး သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ကြည့်လို့မှ မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ လည်ချောင်းခြောက်ပြီး လည်ချောင်းနာရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေကို အရင်ကြည့်ရအောင်.
အအေးမိ ဖျားနာဆိုတာ လေထဲကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ သင်က ကိုယ်ခံအား ကောင်းနေရင်တော့ အအေးမိဖျားနာ ခဏလေးပျောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ ခံနိုင်အားနည်းသူတွေမှာကတော့ မသက်သာဘဲ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ လည်ချောင်း ယားပြီး ချောင်းခြောက်ဆိုးတာတွေပါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေက သာမန် အအေးမိ ဖျားနာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး လည်ချောင်းခြောက်ခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း တွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွက် ရေကို လုံလုံလောက်လောက် မသောက်သုံးပေးရင် လည်ချောင်းခြောက်စေပါတယ်။ ရေအရမ်းဆာလာမယ်၊ အာခေါင်တွေခြောက်မယ်၊ မောပန်းနေမယ် စတာတွေက ရေဓာတ်နည်းနေတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
အစာအိမ်ထဲက အစာရည်တွေ အစာပြွန်ထဲ ဖိတ်စင်စီးကျခြင်း မရှိရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အဆို့ရှင်က အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် လေချဉ်တွေ ဖောက်လာမှာပါ။ လေချဉ်တွေ ဖောက်လာရင် လည်ချောင်းတွေ ခြောက်မယ်၊ ရင်ခေါင်းထဲမှာ ပူနေမယ်၊ အစာမြိုရခက်မယ်၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ ခါးခါးကြီး ဖြစ်နေမှာပါ။
လည်ချောင်းယားစေတဲ့ ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Streptococcal ပိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပိုးရှိတဲ့ လူတွေက လည်ချောင်းနာ၊ လည်ချောင်းယားအပြင် အခြားသော ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဖျားနာမယ်၊ အရေပြား အင်ပျဉ်တွေထမယ်၊ အာသီးတွေရောင်မယ်၊ လည်ပင်းအကျိတ်တွေ ရောင်တာမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးဝါးနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက လည်ချောင်းခြောက်တာ သက်သာစေတယ်ဆိုပေမဲ့ ရက်တွေ ကြာတာတောင် မပျောက်နိုင်သေးရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ။
Previous Previous post: လူမှုကွန်ရက်တွေက သင့်အတွက် ဆေးလား၊ ဘေးလား?
Next Next post: အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်ကို လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း(၅)သွယ်နဲ့ ကျော်လွှားလိုက်ကြမယ်
တစ်ခုခုစားရင် ကြက်သွန်နီမထည့်နဲ့နော်။ ပါးစပ်နံမျာစိုးလို့ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ပြောနေမိတာ ကိုယ်တိုင်တောင် အစစ်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်သွန်နီက မီးဖိုချောင်ရဲ့ ဂမုန်းလို့တောင်တင်စားကြတာပါ။ ကြက်သွန်နီက မွှန်တယ်၊ အနံ့ဆိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို တော်တော်လေးအထောက်အကူပြုတာပါ။ ဒီတော့ ကြက်သွန်နီကို မကြိုက်ပေမယ့်လည်း စားသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်။…